Banyere Anyị |Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Zhejiang Shawi Digital Technology Co., Ltd.
Shawei Digital dị na mpaghara Zhejiang, tọrọ ntọala na 1998, ọkachamara na Mgbasa Ozi Ime ụlọ na n'èzí.Shawei Digital nwere alaka 11 na China niile, azụmahịa na-ekpuchi site na nrụpụta, ire ahịa, mbupụ na ibipụta.
Ngwaahịa asọmpi bụ isi bụ Self Adhesive Series, Light Box Series (Frontlit and Backlit), Ihe ndozi mgbidi na ihe ngosi Props Sereis.Mgbasa ozi na-ekpuchi si celling na mgbidi ruo n'ala, adabara agbaji, pigmenti, UV, HP Latex, Solvent na Eco-solvent.Shawei Digital na-eme ka ọhụrụ na ngwa, nakwa dị ka ọhụrụ ngwaahịa na-emepe emepe.Na anyị Brand "MOYU" nweta ezi aha. n'ahịa, ika a na-ekpuchi mgbasa ozi mgbasa ozi dị ukwuu yana oke obosara bụ 5M.Na akara MOYU na-enyekwa mgbasa ozi obibi akwụkwọ "PVC n'efu" iji zaghachi na nchekwa gburugburu Green.
Shawei Digital nwere ike ịnye nha dị iche iche site na mpịakọta Jumbol, obere mpịakọta na mpempe akwụkwọ na nha A3 / 4. Gbalịa ike anyị niile iji gboo mkpa nkeonwe gị. Ngwaahịa na-ere ọkụ na North America, South America, Europe, Southeast Asia.
A na-ejikwa sistemụ QC anyị na-achịkwa nke ọma ngwaahịa niile, a na-emepụta ihe niile na ụlọ ahịa ọrụ na-enweghị uzuzu yana anyị nwere R&D nke anyị iji lelee ọganihu niile.Ka ọ dị ugbu a, mgbaba QC ga-eji akụrụngwa dị elu lelee inline site na akụrụngwa ruo na ngwaahịa ikpeazụ.
Ndị ezinụlọ anyị Shawi na-eji nkọwa niile akpọrọ ihe.Anyị na-ebi ebe a na-eto eto ọnụ na gị ụlọ ọrụ.Shawei, MOYU, Gomay ụdị ụfọdụ na-enweta aha ọma n'ahịa anyị ma anyị wetara ngwọta dabara adaba maka ụfọdụ ụlọ ọrụ ama ama dịka Walmart, DHL, Pepsi na ndị ọzọ.
In order to provide better service to ou market , anyị na-aga mgbe niile SGIA,APPP,SIGN CHINA,FESPA ngosi n'ụwa nile,nakọta anyị ahịa' nzaghachi na ịzụlite ọhụrụ ihe maka ha.Shawei Digital bụ otu ndị nwere ike inye gị:
Otu ọrụ nka siri ike
Anyị nwere a siri ike teknuzu otu na ụlọ ọrụ, ọtụtụ iri afọ nke ọkachamara ahụmahụ, magburu onwe imewe larịị, na-eke a elu-edu elu-arụmọrụ intelligentequipment.
Ogo mara oke mma
Ma ọ bụ tupu ire ere ma ọ bụ mgbe erechara, anyị ga-enye gị ọrụ kachasị mma iji mee ka ị mara ma jiri ngwaahịa anyị ngwa ngwa.
Ngwaahịa anyị nwere ezigbo mma na otuto nke mere ka anyị nwee ike guzobe ọtụtụ alaka ụlọ ọrụ na ndị nkesa na mba anyị.Na ihe karịrị 1000 ụdị ngwaahịa nwere ike ịbụ nhọrọ gị dakọtara. Akara ngwaahịa na-ekpuchi site n'ime ụlọ ruo n'èzí.
The ụlọ ọrụ specializes na-amị elu-arụmọrụ akụrụngwa, ike oru ike, ike mmepe ike, ezi oru ọrụ.